TRUESTORY: အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သခင် ခက်ထန် ၏တုန့်ပြန်ချက်
အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သခင် ခက်ထန် ၏တုန့်ပြန်ချက်
ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို မပြင်ဖို့ လက်မှတ် တစ်သိန်းကျော်ကို ဂရုစိုက်စရာ
စကားလား...???? အဲဒီ တစ်သိန်းကျော်
ဆိုတဲ့ လက်မှတ်က ပြည်သူတွေ
လက်မှတ်ပါ..ပါတီ ကိုယ်စားပြု ထိုးထား
တဲ့ လက်မှတ်မဟုတ်ဘူး...ဒါကို ကြည့်ခြင်း
အားဖြင့် ပြည်သူတွေ စကားကို အလေး
မထားဘူး..ငါ ပြင်ချင်တာကို မရ/ရ အောင်
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ လူအများစု ဆန္ဒသဘောထားကို ဦးထိပ်ထားရတာပါ...အခုက ၅၉(စ) ကို ပြင်ဖို့ ၊ မဖြစ်မနေပြင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဆိုတာ သိသာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့၅၉(စ)(ဃ)ကို မပြင်ဖူးဆိုတာ နောက်ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးကိုကြည့်ပြီး မပြင်တာ ...ခင်ဗျား ကို သမ္မတ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တာ တစ်ခုမှ မရှိဘူး..အမျိုးသားရေး သ မားတွေ က စိတ်သန့် တယ် မယုတ်မာတတ်ဘူး..ကလိမ် မကျဘူး..
အချို့၂၀၀၈ ပါ ပြင်သင့်တဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဖို့ လက်ခံသဘောတူပြီးသားပါ..၅၉ စ ကိုတော့ လုံးဝ ထိဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ...အရင်တုန်းက ကျွန်တော် အမျိုးသားရေးကို ဖျက်လို ဖျက်ဆီးလုပ်သူကို အားမနာပ ပြောတယ်..ဆဲတယ်..ဒေါ်စုကိုလဲ အိတ်ဖွင့်ပေးစာဆိုပြီး ဆော်ဖူးတယ်..နောက်ပိုင်း ဘာကြောင့် ပစ်ပစ်ခါခါ မရေးတော့သလဲ...ဆိုတော့ ...
ရန်ဖြစ်နေရတာ ကိုယ့်မြန်မာ အချင်းချင်း ဖြစ်နေတယ်...ကျွန်တော်တို့ က အမျိုးဘာသာ သာသနာရေးအတွက်နဲ့ ဆို ဘယ်သူမဆို ဘယ်အဖွဲ့ အစည်း ပါတီကိုမဆို လက်ခံပါတယ်...ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ ပါတီက တကယ် အမျိုးသားရေးလုပ်နေသူတွေကို စစ်ခွေး၊ကြံ့ဖွံ့ လော်ဘီဆိုပြီး တံဆိပ်တွေကပ်တယ်..အပြင်မှာ လာရောက်တွေ့ ဆုံတာမျိုးမရှိဘူး..အထင်နဲ့ ရန်သူလို သဘောထားဆက်ဆံတယ်..
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ က တတိယအင်အားစု အမျိုးသားရေးသက်သက်လုပ် တဲ့ ပြည်သူ/ သားတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ နောက်မှ နောင်တမရနဲ့ ..အခုခင်ဗျားတို့ ရင်ဆိုင်နေတာ တ ကယ့် ပြည်သူအစစ်တွေဆိုတာ စိတ်ထဲမှတ်ထားပါ.....
ကျွန်တော် စိတ်ကို လျှော့ထားပြီး အမျိုးသားရေးအတွက် သည်းခံခဲ့ပါတယ်..
***ကြံ့ခိုင်ရေးထဲမှာလဲ...အမျိုးသားရေးကို လုပ်သူ မြန်မာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှိသလို NLD ထဲမှာလဲ ရှိတယ်..အခြား အရပ်ဖက်/နယ်ဖက် အသီးသီးမှာလဲ ရှိကြတယ်.****
.မြန်မာပြည်ဆိုတော့ မြန်မာစိတ်ဓာတ် အမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ရှိကြတာချည်းပဲ မတတ်သာလို့ သာ မလုပ်နိုင်ကြတာလေ...ဆိုပြီး..ဒီလူတွေ အမျိုးသားရေး အသိတွေ ၀င်လာအောင်၊ လက်လှမ်းမှီရာ အမျိုးသားရေးတွေ လုပ်တတ်ဖို့ အသိပညာပေးတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုပဲ အဓိကထား ရေးခဲ့တယ်...
တိုက်ခိုက်တဲ့ ပိုစ့်တွေတော်တော်ရှောင်ခဲ့တယ်...အရင်က ခက်ထန် က ဒီလိုမဟုတ်ဘူး..ဒါပေမယ့် အချင်းချင်း မိတ်ဆွေကနေ ရန်သူတွေ မဖြစ်ချင်လို့ ..အဲသလို ဖြစ်ရင်ပျော်နေမှာ က နေမှာ လက်ခုပ်တီးနေမှာက ကုလားတွေမို့ လို့ ပဲ....ဒီတော့ ကိုယ့်အချင်းချင်း စည်းလုံးဖို့ မိတ်ဆွေ တိုးအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ...ရှောင်ခဲ့ပါတယ်..
အခုတော့ ...စိန်ခေါ်နေတာလား...??? ခင်ဗျားဖက်က ဂရုမစိုက်ရင် ကျုပ်တို့ ဖက်က လည်း သောက်ဂရုစိုက်နေမယ်ထင်လို့ လား...???? ကျုပ်တို့ မှာ ဘာဆု၊ ဘာဂုဏ်ထူး၊ ဘာရာထူး၊ ဘာစည်းစိမ်ဂုဏ်ပကာသန ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူး..လဲရဲတယ် အချိန်မရွေးဘဲ...
မှတ်ထား...*** သေတစ်နေ့ ၊မွေးတစ်နေ့ ၊ သေရင် မြေကြီး ရှင်ရင်ရွှေထီး*** တဲ့
From: သခင် ခက်ထန်